China 750W Chinyararire Oiri-isina Mafuta Compressor vagadziri uye vanotengesa | Wanquan
750W Yakanyarara Oiri-isina Mhepo Compressor
Nyarara mweya compressor yakakamurwa kuita mafuta mbeveve mweya compressor uye isina mafuta-isina mbeveve mweya compressor. Oiri ndeye yakanyarara yakanyarara mweya compressor, uye ruzha runowanzoita makumi mana db; Ruzha rwemafuta-isina chinyararire mweya compressor ingangoita 60 dB. Ndeipi yakanaka amorphous yakapfava magnetic zvinhu zvekumanikidza kwemhepo neoiri-isina mukombe sleeve pisitoni? Unogona kusarudza Anhui Huajing Machinery Co, Ltd. inotevera Xiaobian inokupa sumo pfupi, uchitarisira kukuunzira rubatsiro.
1. Simba rishoma rekushandisa: iro reshiyo yekumanikidza uye gasi kugadzirwa kunoenderana negoridhe reshiyo. Pasi pemamiriro ekushomeka kwesimba rekushandisa, inogona kuburitsa gasi sosi nekukurumidza, uye kutanga nekumira kwemuchina ndewe otomatiki dhizaini, iyo isingoponese simba chete, asi zvakare inokuchengetedza iwe kunetseka.
2. Core tekinoroji: iyo cylinder liner system inongogadzira nano yekumhanyisa tekinoroji, inosiya zvigadzirwa zvisina mafuta-zvinowanzo shandiswa nevakajairika vagadziri, uye yakanyarara, yakachena, hupenyu hurefu hwebasa uye inokodzera zvinodikanwa zvepamusoro, senge chikafu nemishonga maindasitiri.
3. Kuomesa uye sterilization: mafirita ane akasiyana echokwadi zvinodiwa anogona kusarudzwa zvinoenderana zvakasiyana zvidimbu zveindasitiri, kuitira kuve nechokwadi chekushandisa mhedzisiro nekusimudzira kugutsikana kwevashandisi.
Chekutanga pane zvese, izvo zvemuchina wacho pachawo hazvina zvinhu zvine mafuta uye hazvidi kuwedzera chero mafuta ekuzora panguva yekushanda. Naizvozvo, mhando yemhepo yakaburitswa yakavandudzwa zvakanyanya uye kuchengetedzwa kwemidziyo inotsigira inodiwa nemushandisi inovimbiswa. Kusiyana nemafuta emhepo compressor, iyo yakaburitswa gasi ine huwandu hukuru hwemamorekuru emafuta, ayo anounza akasiyana madosi ehurosi kune inotsigira michina yemushandisi, Naizvozvo, zvakakosha kusarudza oiri-isina chinyararire mweya compressor kuti uve nechokwadi chemhepo mhando. Kechipiri, kushandiswa uye kugadziriswa kwekunyarara kwemafuta-isina mweya compressor zvakare zvakareruka uye yakapusa pane oiri-isina mweya compressor. Sezvo isu tese tichiziva, mamwe mafuta-anotakura air compressors anoda kuchinjirwa kana kuzadzwa mafuta nguva nenguva panguva yekushandiswa, uye mamwe macompresser emhepo ane jekiseni remafuta uye leakage yemafuta, iyo inosvibisa nharaunda yakatenderedza kune akasiyana madhigirii, inoda kuti vashandisi vashandise nguva yekuchenesa , iyo inowedzera basa revashandisi, izvo zvinopesana nekuda kwevanhu kushandisa michina nemidziyo yekuvandudza mashandiro ebasa. Zvichienzaniswa nemhando iyi yemhepo compressor, iyo isina mafuta-yakanyarara mweya compressor haidi kuti mushandisi apedze nguva achigadzirisa, nekuti haidi kuwedzera donhwe remafuta. Iyo yakazara otomatiki yekumanikidza yekunzwa switch inozongotanga kana kumira maererano nemhepo vhoriyamu iwe yaunoshandisa, iyo inogona kutsanangurwa sekushushikana-kuchengetedza uye simba-kuchengetedza. Iyo otomatiki yedhiraina mudziyo zvakare inoponesa vashandisi zvakawanda kunetseka, saka zviri nyore kwazvo kushandisa. Hupenyu hwebasa hwakareba zvakare kupfuura chinyararire mweya compressor nemafuta!
Pashure: YCT dzakateedzana remagetsi kumhanya inodzora mota
Zvadaro: 750W Yakanyarara Oiri-isina Mhepo Compressor
China factroy zvitengeswa Runyararo Oiri-isina Mhepo Compre ...
Yakananga-yakabatana inotakurika mhepo compressor
1500W Yakanyarara OiL-yemahara Mhepo Compressor
1600W Chinyararire OiL-isina Mhepo Compressor china manu ...